The Ab Presents Nepal » भाग्यमानीसँग हुने यी कुरा , तपाईसँग छ कि छैन ?
भाग्यमानीसँग हुने यी कुरा , तपाईसँग छ कि छैन ?
सुखी जीवनको लागि धन सम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । बिना धनको न नाम रहन्छ, न मान सम्मान नै मिल्छ । परिवारको पालन पोषण गर्नको लागि धनसम्पत्ति हुनु आवश्यक छ । आजको समयमा शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि पनि धनको जरुरी छ ‘।
धन बिना कुनै रोगको उपचार सम्भव छैन । वृद्धावस्थामा पनि धनको ठूलो साहारा चाहिन्छ । यसर्थ मानसम्मान, शिक्षादीक्षा, परिवारको पालनपोषण, र रोगलाग्दा उपचारको लागि धनको अति आवश्यक हुन्छ’ ।
मन्दिरमा प्रवेश गर्नु अगाडि पुनः एकपटक शुद्धि गरिन्छ । शौचादिबाट निवृत्ति भएपछि पूजा, प्रार्थना गर्नुपूर्व आचमन गरिन्छ। मन्दिरमा गएर पनि सबैभन्दा पहिले आचमन गरिन्छ । सन्ध्यावन्दन के बेला आचमन, प्राणायामादि गरेर गायत्री मन्त्रले निराकार ईश्वरको प्रार्थना गरिन्छ । त्यसैले पूजा गर्नु पहिले शुद्धि र आचमन गर्नु जरुरी हुन्छ ‘।
हिन्दू धर्मशास्त्रमा स्नान नगरिकन भोजन गर्न नहुने लेखिएकाे छ । शास्त्रमा लेखिएको कुरा,“अस्नायी समलं भुंक्ते अर्थात् ननुहाई भोजन गर्ने मानिसले मल खाए बराबर हुन्छ ।आजकल पश्चिंमेलि अनुकरण गरेर मानिसहरू यी कुरालाई ध्यान दिन छाेडिरहेका छन् तर यसका पछाडि वैज्ञानिक कारण पनि विद्यमान रहेका छन् ।
नुहाएपछि हाम्रो शरीरमा पाचनरस उत्तेजित हुने गर्छ जसले भोजन(खाना) पचाउन मद्दत गर्छ जबकि नुहाउनु पहिले खाना खाँदा शरीरले भोजन पचाउन अतिरिक्त मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नुहाउनुअघि झोल पदार्थ मात्र लिएको राम्रो किनकि तरल पदार्थ सजिलै पच्छन् तर ठोस भोजन चाहिँ नुहाएपछि नै लिनु उत्तम हुन्छ
हरेक व्यक्ति धन कमाउन चाहन्छ र त्यसका लागि दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छ । तर धेरै मानिस सफल हुन सक्दैनन् । उनीहरुको गुनासो हुन्छ, यतिधेरै मेहनत गर्दा पनि मनले चाहेको सफलता हासिल गर्न सकिएन ‘।